Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 3, 2018 00: 16 No Comments
Sababaha udub-dhexaadkan waa mid kala duwan. Markii hore, waxay bilawday inay calaamadeyso is dhexgalka shaqsiyaadka iyo in si sahal ah loo garto asalkooda dadka madow. Waxay sidoo kale oggolaatay farcankii nafta nasiib darraystay, in ay aqoonsadaan midba midka kale oo ay xasuustaan ​​asalkiisa marka ay ka fogaadaan dhulkooda.
Sidoo kale, sharaxaadihii dhowaan laga soo xigtay Benin ayaa sheegay in qoysaska qaarkood ay ka dhalanayaan faracooda iyadoo ujeedada ugu dambeysa ee looga hortagayo addoonsiga tan iyo markii xatooyinku ay doorbidayeen jidhdil aan la jidh-dilin.
Calaamadahan waxaa lagu sameeyaa carruurta, da'doodu tahay toban sano jir. Maaddaama ay dhacaan marxalado kala duwan, isbeddeladan ayaa badanaa la socda xaflad. Macnuhu waa tiro badan maadaama baaxaduhu ay kala duwan yihiin. Marka loo eego muuqaalkooda, cabbirkooda iyo jagooyinkooda wajiga, waxaa suurtogal ah in la aqoonsado shakhsiyaadka jinsi ahaan, qoys ama xitaa qaybta bulshada
Marka calaamad muujinaysa shakhsiyaadka iyo kala-duwanaanshaha, isbeddelku wuxuu ahaa calaamad muujinaysa aqoonsi oo ku faraxsan dad Afrikaan ah. Ugu dambeyntii waxay u isticmaali karaan inay isku muujiyaan inay yihiin kuwa ka tirsan qabiilka, qabiilka ama fasalka heer sarre ah. Dhibaatada ayaa had iyo jeer abuuray, iyo dhammaan bulshooyinka halkaas oo lagu dhaqmo, oo ah cabbir asaasi ah oo ah dhaqanka aadanaha.
Laakiin maanta, dhaqankan wuxuu ku saabsan yahay in la waayo. Xaqiiqdii, haddii hore, carruurta aan cagaha ku jirin waxay mudo dheer ku jireen maadada jimicsiga ee dugsiyada. Maalmahan, si ka duwan, dhaqankan waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay dhaqan, mararka qaar waxyeello, mararka qaar dib-u-soo-kabasho, marmarka qaarkood waxay halis ugu jirtaa heerka nadaafadda. Calaamadahan ayaa ah kuwo ceeb ah maanta. Waxaa lagu mamnuucay wadamo badan, gaar ahaan Burkina Faso, si ay u noqoto mid la tirtiro: dadka ugu dambeeya ee maanta haysta badanaa caadiyan ugu yaraan 40 tani waa jiilkii ugu dambeeyay.
Sep29 04: 41